जम्मू-कश्मीरकाे विषयमा सरकारले शक्तिकाे दुरूपयाेग गरेकाे राहुल गान्धीकाे आराेप
नयाँ दिल्ली । जम्मू–कश्मीर राज्यको विशेषाधिकार प्रत्याभूत गरिएको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने भारतीय सरकारको निर्णयप्रति विपक्षी दल काँग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीले आलोचना गरेका छन् ।
जम्मू-कश्मीरकाे इतिहासमाथि विपक्षी दलकाे व्याख्यान, धारा ३७० खारेज गर्नै नसकिने जिकिर
नयाँ दिल्ली । भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीरबाट संविधानको धारा ३७० हटाउने र राज्य पुनर्गठन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव लोकसभा बैठकमा पेश गरेका छन् ।
भारतीय संविधानकाे धारा ३७० मा के थियाे ? किन गरियाे खारेज ?
काठमाडौँ । जम्मू–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गर्ने भारतीय सरकारको निर्णयलाई लिएर यतिबेला भारतीय राजनीति तातेको छ ।
धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयमाथि काँग्रेस आईले दियाे कडा प्रतिक्रिया
नरेन्द्र माेदीले आफ्ना सांसदहरूकाे 'कक्षा' लिने
नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका सांसदहरूको कक्षा लिने भएका छन् ।
कार्यालय सहायकका भरमा पर्यटक सूचना केन्द्र
भीमदत्तनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख नाका गड्डाचौकी भारतसित जोडिएको छ । नेपाल भित्रिने बाह्य पर्यटकलाई यहाँको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले २०६१ सालमा गड्डाचौकीमा नेपाल पर्यटन बोर्डको पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको हो । पाँच वर्षदेखि उक्त कार्यालय सहायकका भरमा सञ्चालनमा छ । यहाँ थानेश्वर लेखक कार्यालयक सहायकका रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।
न्यूजिल्याण्डको बलरको दबाबमा भारत, तस्रो विकेट पनि गुमायो,
काठमाडौँ । भारतले तेस्रो विकेट पनि गुमाएको छ । न्यूजिल्याण्डले दिएको २४० रनको लक्ष्य भेट्टाउन मैदानमा उत्रिएको भारतीय ओपनर रोहित शर्मालाई मार्ट हेन्रीले आउट गरेका थिए । शर्माले ४ बल फेस गर्दा मात्र १ रन जोडेर पेभिलियन फर्किए ।